Global Voices teny Malagasy » Paragoay: ireo mpilatsaka ho fidìna izay mampiasa ny blaogy hahazoana mpifidy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 24 Marsa 2008 14:16 GMT 1	 · Mpanoratra Muna Annahas Nandika Tokinao
Sokajy: Amerika Latina, Paragoay, Fifidianana, Teknolojia
Amin'ny 20 aprily ho avy izao no hifidy izay ho filoham-pireneny ny Paragoay. Betsaka amin'ireo mpilatsaka ho fidiana manan-danja no mampiasa ny blaogy ho fomba ifandraisana amin'ireo mpifidy, satria ao no ilazàny ny fomba fijeriny ny lafin-javatra iray manokana, ary ao koa no anazavàny ny drafitry ny governemanta izay hajorony raha lany izy ireo. Ireo blaogy ireo moa dia avoakan'ny gazety “Diario ABC “, izay isan'ny gazety lehibe indrindra ao Paraguay.
Fernando Lugo , izay eveka katôlika romana, sady filoha amperin'asa ao amin'ny Antoko demokratika kristianina. Fariparìtany ao ny dingana nataony mba ahafahany mirotsaka amin'ity andraikitra lehibe indrindra ao Paragoay ity  [es].
Blanca Ovelar kosa dia mpilatsaka ho fidìna avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana ankehitriny, ny Antoko Colorado. Izy dia tohanan'ny filoham-pirenena paragoay ankehitriny, Nicanor Duarte. Iray amin'ny resaka lehibe fanaony ny ady amin'ny kolikoly, ary hoy ny anao vavy  [es] :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/03/24/706/
 mba ahafahany mirotsaka amin'ity andraikitra lehibe indrindra ao Paragoay ity: http://www.abc.com.py/blogs/post_view.php?bl_id=14&id=d5e67ced15e86d994718b27caa9de6e7
 ady amin'ny kolikoly, ary hoy ny anao vavy: http://www.abc.com.py/blogs/post_view.php?bl_id=213&id=d5e67ced15e86d994718b27caa9de6e7